प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा दुष्ट भावना भएका डाक्टर को थिए? -3ghumti
प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा दुष्ट भावना भएका...
फाल्गुण १४, २०७७ शुक्रवार १०:१४ बजे
काठमाडौं। पञ्चायतका बेला लोकतन्त्रका लागि लामो जेलजीवन बिताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनेक अनुभूति छन्। उनका राजनीतिक जीवनसँगै अनुभूतिका थाक उनकी पत्नी राधिका शाक्यमा पनि छ।
जेलमा पञ्चायतको यातनादेखि बिरामी रहेका ओलीको उपचार हुने गरेको थियो। तर उपचारका क्रममा आउने डाक्टरहरूका विषयमा ओलीले पत्नी शाक्यसँग कतिपय जिकीर गरेका रहेछन्।
शाक्यको पुस्तक मेरा अनुभूतिहरूमा उनले यस्ता प्रसङ्गलाई कोट्याएकी छन्। आखिर हालका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला दुष्ट देखेका डाक्टर को थिए?
शाक्यको पुस्तकांशमा यसको उल्लेख छ। शाक्यले लेखेकी छन्–
उहाँले जेल जीवनमा भोगेका दुई जना डाक्टरहरूको विपरीत अलग अलग चरित्रको बेलाबेला प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ । अति खराब, दुष्ट र मानवीय भावना पटक्कै नभएका डा. आनन्दबहादुर श्रेष्ठ र डाक्टरी पेसाको ख्याल गर्ने र मानवीय भावना भएका डा. पुस्कर भारती थिए रे । डा. भारतीले डाक्टरको धर्म उपचार गर्नु हो भनेर केपीजीलाई केही औषधिका ‘प्रेस्किप्सन’ लेखिदिँदा डा.आनन्द बहादुर श्रेष्ठले त्यसलाई च्यातिदिएको र डा. भारतीलाई जनकपुरमा सरुवा गरिदिएको घटना उहाँले मलाई सुनाउनुभएको थियो । यस्ता डाक्टर, जसले आफ्नो पेशागत धर्म छोडेर सत्ताको लालचमा मानवमाथि अत्याचार गर्दारहेछन् । हुनत, त्यसबेलाको पञ्चायती सत्ताको लालचमा परेका डाक्टरको के कुरा गर्नु, आज पनि केपीजीको स्वास्थ्यलाई लिएर राजनीति गरिरहेका देखिन्छन् । तर, उहाँको स्वास्थ्य निरङ्कुश व्यवस्था विरुद्ध संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्राकै कारण कमजोर बनेको हो । यस यथार्थलाई बुझेर उहाँको स्वास्थ्यमाथि राजनीति नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्छ ।